Haweenay Dalka Jarmalka Kula Kulantay Ninkii Ku Kufsaday Waddanka Ciraaq Oo Ay Kasoo Qaxday | Berberatoday.com
Haweenay Dalka Jarmalka Kula Kulantay Ninkii Ku Kufsaday Waddanka Ciraaq Oo Ay Kasoo Qaxday
Germany(Berberatoday.com)-Gabadh yar oo Yazidi ah oo laga iibiyay kooxda isku magacaawday dowladda Islaamka ayaa BBC-da u sheegtay taariikhdeeda naxdinta badan leh, kadib markii ay u soo baxsatay dalka Jarmalka taasi oo si waji-ka-waji ah wadada kula kulantay ninki iyada afduubtay.
Dhowr bilood ka hor waddo ku taallo banaanka suuq laga dukaameeysto ayay ka maqashay qof magaceeda ugu yeedhayo.
Ashawaaq ayaa BBC-da u sheegtay: ” gaadhi ayaa agteeyda bareegga lagu qabtay. Waxa uu fadhiyay shirka hore ee gaadhiga. Waxa uu igula hadlay luuqadda Jarmalka waxa uuna I weeydiyay ‘ adiga Ashwaq miyaa tahay? Aad ayaan isugu naxay oo waan gariirayay. Waxa aan ku idhi ‘Maya, ee adiga kumaa tahay?”’
Waxa ay tidhi waxaa uu ku jawaabay ” Waan ogahay Ashawaaq ayaa tahay, anigana waxaan ahay Abu Humam.”
Ashwaq waxa ay tidhi intaa kadib waxa uu bilaabay in uu luuqadda carabiga kula hadlo waxa uuna ku yidhi been ha ii sheegin.
”waan ku garanayaa, ayuu yidhi. Xageese ku nooshahay, yaana la nooshahay? Wax walba waa uu ogaaday oo nolosheeyda Jarmalka ku saabsan.”
Waxa ay tidhi: Nolosheydii kumaanan fakarin wax noocan ayaad Jarmalka ku arkeysaa.
Dacwad oogaha federaalka ayaa sheegay in Ashwaaq ay booliska u gudbisay dhacdada shan maalmood kadib. Ashwaaq ayaa sheegeysa in ay wax walbo u sheegtay baadheyaasha oo xitaa ay ka mid tahay dhacdadii naxdinta badan lahayd ee Ciraaq.
Booliska ayaa Ashawaaq u sheegay in haddi ay mar labaad la kulanto Abu Humam ay la soo xidhiidhto booliska durbadiiba.
Waxa ay sidoo kale booliska u sheegtay in ay baadhaan Kaamirada qarsoon ee suuqa laga dukaameysto balse waxa ay sheegatay in ay taasi dhicin.